Macbudyada Masar | Wararka Safarka
Mariela Carril | 05/10/2021 17:00 | Masar, Maxaa la arkaa
Haddii aad jeceshahay taariikhda, ilbaxnimooyinka qadiimiga ah iyo waxyaalaha qarsoon, Masar waa inay ku jirtaa waddadaada meelaha safarka ah. Mar noloshaada ka mid ah waa inaad tagtaa Masar oo aad aragtaa cajaa'ibyadeeda.
ka macbudyada Masar Waa kuwo cajiib ah waxaadna ku arki kartaa sawirro badan iyo telefishanka, laakiin iyaga oo nool oo toos u arka waa wax aan qiimo lahayn. Miyaad seegaysaa iyaga? Halkan waxaan kuugu reebaynaa liiska macbudyada ugu fiican Masar, kuwa ay tahay inaad aragto haa ama haa.
Dhismayaashaan waa kumanyaal sano oo shaki la'aan waa wax sharaf leh. Safarkii ugu horreeyay ee Masar ayaa ka yaabiya dhammaan dadka socotada ah, laakiin haddii aad nasiib u yeelato inaad dhowr jeer tagto la yaabku ma joogsado taasina waa wax weyn.
Masar shaki la'aan waxay leedahay macbudyada ugu weyn adduunka iyo khadadka guud waxay ka soo jeedaan qarnigii afraad ee BC. Waa run in badan oo iyaga ka mid ahi ay dunida caan ka yihiin, laakiin sidoo kale waxaa jira kuwo kale oo qurux badan oo aan lahayn saxaafad intaa le’eg.
Masar wax walba waa qadiimi, meel kasta hal talaabo waxaa ka jira burbur hore ama macbudyo. Laga soo bilaabo Qaahira ilaa Luxor, ka dib wabiga Niil ilaa Aswan, waa wax aan macquul ahayn in aan la kulmin qaar ka mid ah dhismayaashaan cajiibka ah.
Marka hore waa inaad magacaawdaa Macbadka Karnak kaas oo la dhisay intii u dhaxaysay 2055 BC iyo 100 AD Waxay u heellan tahay saddex ilaah, Amun-Ra, Mut iyo Montu, waana in la dhahaa macbudkeeda ugu weyn waa goob diimeedka ugu weyn ee abid la dhisay.
Geeska la yaabka leh waa Hoolka Hypostyle, oo ah goob lagu daboolay kaalmooyinkii barxadaha ee ku badnaa Masar laakiin si fiican loogu baran karo goobtan. Qolkani xoogaa waa weyn yahay, oo leh 134 tiir iyo 16 saf. Halkan waxaa ku habboon in lagu sameeyo socdaalka hage oo si taxaddar leh u dhegeyso faahfaahinta.
El Macbadka Abu Simbel Waxaa markii hore laga dhisay dhulka hoose ee webiga Niil, laakiin Dhismaha biyo -xidheenka Aswan, waxay noqotay in la raro galay naqshad injineernimo casri ah. Taasi waxay dhacday 60 -meeyadii oo goobtii asalka ahayd ee dhismuhu waxay ku hadhay xagga hoose ee harada Nassar.
Maanta Macbadka Abu Simbl waa ammaan: Waxaa jira 20 tiir oo Ramses II waxaana la dhisay qiyaastii 1265 BC, laakiin kolonyadaasi waxay ku jirtaa xaalad guud oo aad u wanaagsan. Waxa inta badan la sameeyo waa in la kiraysto dalxiis laga bilaabo Luxor ilaa Aswan waana mudan tahay in la safro 280 kiiloomitir inta u dhaxaysa labadaas dhibcood. Hab kale ayaa ah in markabka Niil loo qaado Aswan oo halkaas lagu qaato dhowr maalmood.
Macbadka Medinet Habu wuxuu u heellan yahay Ramses III oo tiirarkiisa qaar baa haya sawirradoodii. Waxay ku taal daanta galbeed ee Luxor iyo Waa macbudyadii labaad ee ugu da'da weynaa Masar.
Macbudka mar walba iga yaabi jiray, maxaa yeelay dib -u -dhiska ayaa oggolaanaya in daaqad la furo wixii hore, waa Macbadka Mortur ee Hatshepsut. Hatshepsut waxay ahayd boqorad dhimatay 1458 BC iyo qabrigeedii quruxda badnaa ee aadka u weynaa waxay u dhowdahay dooxada boqorrada, oo ku taal daanta galbeed ee wabiga Niil. Boqoraddu waxay ka mid ahayd haweenkii ugu muhiimsanaa waqtigeedii waxayna ka mid ahayd fircoonnadii ugu guulaha badnaa, waxayna xukunka haysay 21 sano.
Macbudka waxaa laga dhisay dhagaxa weynWaxay leedahay saddex heer oo lamadegaanka gala waxayna khubarada qadiimiga ahi sheegeen in waagii ay dhulalkani lahaayeen dhir aad u waaweyn, inkasta oo hadda ay yihiin lamadegaan weyn. Dhirta ayaa laga yaabaa inay maqan tahay, laakiin weli waa goob cajiib ah. Waxaa jira safaro badan oo la hago oo ah Dooxada Boqorrada guud ahaan.
El Macbadka Ramses II waa inaad taqaanaa sidoo kale. Ka dib oo dhan, Ramses II wuxuu ka mid ahaa fircoonyadii ugu caansanaa uguna caansanaa. Asal ahaan waxay ahayd a macbudka maydka aad ugu eg tii Medinet Habu, iyada taallooyin waaweyn oo loo hibeeyay boqorka.
El Macbadka Luxor Waa caan adduunka. Macbudku wuxuu ku yaal magaalada lafteeda, ee webiga Niil waana muuqaal cajiib ah, gaar ahaan habeenkii marka laydhadhkoodu daaran yahay waadna sawiri kartaa. Macbudku wuxuu ku yaallaa meeshii ahaan jirtay Thebes, wuxuuna u muuqdaa in la dhisay intii ka hoosaysay boqortooyooyinkii XNUMXaad iyo XNUMXaad. Maamuus ilaaha Amun-Ra waxayna leedahay geesyo kala duwan waqtiyo kala duwan.
Dhismuhu si fiican ayaa loo ilaaliyay oo wali wuxuu leeyahay dhismayaal badan, gaar ahaan afaafka isku xira laba barxadood. Oo macbudkii Amon lagu sharfay weli wuxuu leeyahay qaar ka mid ah tiirarkii asalka ahaa. Sida iska cad, waa Dhaxalka Adduunka.
El Macbadka Kom Ombo Waxay ku taal webiga Niil waxayna u heellan tahay laba ilaah oo kala duwan, Horus iyo Sobek. Waa macbud mataan ah oo laba dhisme ka samaysan muraayad. Uma duugna kuwa kale waayo waxaa lagu hoos dhisay boqortooyadii ptolemaic (asal ahaan Giriig iyo ka dib Alexander the Great). Markii dambe, intii uu jiray xukunkii Roomaanka, waxoogaa kordhin ayaa la sameeyay. Halkan waxaa lagu ogaaday, tusaale ahaan, 300 hooyooyin yaxaas maantana waxaa lagu soo bandhigay Matxafka Yaxaaska oo aad booqan karto.
El Macbadka Edfu wuxuu ku yaal daanta galbeed ee wabiga Niil iyo waa mid ka mid ah kuwa ugu wanaagsan ee la ilaaliyo dalka. Dhismihiisu wuxuu bilaabmay 237 BC wuxuuna dhammaaday 57 miilaadiga, gacanta Cleopatra aabihiis, Ptolemy XII. Wali waxay leedahay saqafkeeda sidaas darteed waxay siinaysaa dareen kale, oo waqtiga ku dhow.
El Macbadka Seti I wuxuu ku yaal Abydos wuxuuna ka kooban yahay qoraalkii XNUMXaad ee Dynasty oo loo yaqaan the Liiska Boqorrada Abydos, liis taariikheed oo ay ku jiraan garaashyada fircoonnadii boqortooyo kasta oo Masaari ah min Menes ilaa Seti I aabbihiis, Ramses I. Macbudku wuxuu ka sarreeyaa Niilka.
Waxaan sidoo kale magacaabi karnaa magaca macbudyada maydka ee Dooxada Boqorrada, inkasta oo aanay ahayn kuwo dhaldhalaalaya ama la yaab leh sida kuwa kale. Halkaan ka aqriso qoraalka Macbadka Ramses IV, kan Merneptah iyo kan Ramses VI. Waxay leeyihiin qolal hawo weyn leh, rinjiyeynta midabka leh taasi oo ka tarjumaysa muuqaalada Kitaabka Dhimatay ... Runtu waxay tahay ka dib markii aan arkay dhagax aad u badan oo qaawan, midabada dhalaalaya, meesha bannaan iyo dareenka nabada ee meelahan waa wax lala yaabo. Ma jiraan sarcophagi ama wax la mid ah, dhammaantood waxay aadeen matxafyada ama tuugada, laakiin waa goob mudan in la booqdo.
Ugu dambeyntiina, the Kolossi ee Memnon, oo la dhisay qiyaastii 1350 BC Waxay yihiin laba colossi in matala Fircoon Amenotep III meel fadhida. markii hore waxay ilaalin jireen albaabka macbadka maydka ee fircoonigaas. Macbudkii ay ka tirsanaayeen ayaa ku dhowaaday inuu baaba'ay sidoo kale colossi -ku aad buu u dhaawacmay, laakiin waa inaad soo booqataa.
Macbudyadan wuxuu ku daraa habeenada lamadegaanka ah, galabtii bacadlaha, wuxuu dhex maraa Qaahira, booqashada Ahraamta iyo dabcan, booqashada Matxafka Qadiimiga ee Qaahira. Yacni, waligaa ma awoodi doontid inaad ilowdo Masar.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka Safarka » Afrika » Masar » Macbudyada masar
Magaalooyinka ugu quruxda badan Huelva